Imihlobiso → Ukufakelwa kwekhompyutha / umhlobiso wokukhangisa nezingubo zomsebenzi
Kunezindlela eziningi zokuhlobisa, amasu amasha angadida abantu abaningi lapho bebhekene nokukhetha kwabo. Isinqumo ngohlobo lokumaka sincike ezicini eziningana. Ukunquma inhloso yezingubo noma izindwangu zokuphrinta kungasisiza ukuthi sikhethe inqubo ethile. Noma iyiphi indlela yokumaka oyikhethayo, ukuthungwa kwe-embroidery kuhlala kuyindlela enhle kunazo zonke.
Indlela endala yokuhlobisa
Imifekethiso Yaziwa ngezinkulungwane zeminyaka ngenxa yefomu layo lendawo yonke, ihlala isebenza ngaso sonke isikhathi. Ngenxa yalokhu, izindwangu ezifekethisiwe zibukeka zinhle kakhulu futhi ziqinisekisa impilo ende kakhulu kunezindwangu ezihlotshiswe ngamanye amasu.
Cap ngemidwebo eyenziwe nge-embroidery yekhompyutha
Imihlobiso yazo zonke izikhathi
Okwethu inkampani isebenzelana nokwenza okuhlala isikhathi eside futhi okusebenzayo imihlobiso ezokusebenzela nezokukhangisa, kanye nezindwangu zasehhotela nezokuphekela. Sine ipaki yethu yomshini, esenza sikwazi ukuqinisekisa amanani entengo okuncintisana nezikhathi ezimfushane zokulethwa.
Senza yonke imizamo ukuqedela i-oda ngalinye. Ithimba lethu lizojabula ukukusiza ukhethe imikhiqizo nendlela yokuhlobisa. Siphinde futhi sinikeze insizakalo yokupakisha izingubo.
Ukubulawa ukugqokwa kwamakhompyutha kudinga ukuthengwa kohlelo lokufekethiswa. Le ndlela inconyelwa osayizi behluzo abancane. Lapho uhlelo lokuhlobisa seluthengiwe, luhlala ku-database yethu ngokuhle, ngakho-ke uma ubuyela kithi nomunye umyalo, ngeke ukhokhiswe ngokulungiselela uhlelo olufanayo okwesibili. Kuyindlela enhle kakhulu futhi engaphelelwa isikhathi yokuhlobisa.
Kuyinto eshaya ngempela kulabo ababeka ukuqina kwasekuqaleni. Okufakiwe kwadingeka ngisho nangemva kweminyaka ibukeka imangalisa. Lokhu kuzokwanelisa labo abanakekela isithombe senkampani yabo. Lolu hlobo lokuphrinta luye lunconyelwe nezingubo ezigezwa njalo ezivezwa yizinto zokuwasha ezinamandla.
Inqubo yokusebenzisa ukufekethiswa kwekhompyutha
Ukuphrinta kwesikrini inqubo yokuhlobisa lapho ifomu lokuphrinta liyisifanekiso esisetshenziswe kumeshini ominyene. I-mesh ingenziwa ngensimbi noma i-fiber yokwenziwa. Ukwenza ikhophi kuqukethe ukupenda ngopende. Ukwenza ukuphrinta kwesikrini kufaka ukuthengwa kwe-matrix yokuphrinta.
Lesi yisixazululo esihle kakhulu lapho ufuna ukuthola umphumela wemibala enamanzi ngenkathi kugcinwa ukucacisa nokumelana nokuhuzuka. Iphrojekthi eqediwe izobukeka iqinile amasonto amaningi noma izinyanga.
Iphrojekthi ngayinye yenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende ngazinye. Ngaso sonke isikhathi lapho silungisa umkhiqizo ngokwezinto ezibonakalayo nohlelo kanye nendawo yemidwebo evumelana neklayenti. Ngezikhathi ezithile, siguqula ukwakhiwa ngemvume yeklayenti ukuthola umphumela omuhle kakhulu.
Ukuphrinta kwesikrini kungenziwa hhayi kuphela ezingutsheni, kodwa nakumagajethi akhethiwe
Ukuphrinta okuqondile yi-DTG
Ukuphrinta kwe-DTG noma i- "Direct To Garment" ngu indlela yesimanje yokuhlobisa ngqo kwezindwangu nezingubo. Inqubo ye-DTG ikuvumela ukuthi usebenzise noma imiphi imidwebo kwindwangu kakotini noma kukotini ngokuhlanganiswa kwe-elastane / viscose. Izithombe zenziwa kusetshenziswa iphrinta ekhethekile. Ukuphrinta ngenqubo ye-DTG kunika amandla ukukhiqizwa okuphelele kwemibala kanye nokushintshwa kombala. Ukuphrinta kungenzeka ngaphandle kwesidingo sokulungiselela ukwakhiwa kusuka esiqeshini esisodwa.
Ukuqina kokuphrinta kwe-DTG kuncike ezintweni eziningana. Okokuqala, imodeli nemingcele yemishini - imishini emisha, iba ngcono ikhwalithi nokusebenza. Okunye okuthonya ukuqina yizinhlobo zokupenda ezisetshenzisiwe, indwangu okwenziwa ngayo ukuphrinta namakhono esisebenzi.
Ukuphrinta kwe-DTG, ngenxa yokuqamba kwayo, kungasetshenziswa ekukhiqizweni nasekukhiqizweni kusuka engxenyeni eyodwa. Lokhu kunika amandla ukuphrinta kokuhlola ngaphambi kokuqala lonke uchungechunge. Futhi kuyindlela enhle yezipho zomuntu siqu zokuzalwa, zomshado noma zesikhumbuzo. Izinkampani, futhi kuyisixazululo esikahle uma sifuna ukuthi isisebenzi ngasinye sibe negama laso noma isihloko somsebenzi ezingutsheni zaso. Okufanayo kuyasebenza ezingutsheni, isb.ngokwembatho yeklabhu yezemidlalo, lapho izinombolo ezahlukahlukene ziphrintwa kumashethi noma izikhindi.
Iphrinta entsha UMfoweth 'uDTXpro Bulk, esikhulise ngayo ipaki yethu yomshini, iyimodeli eguquguqukayo futhi eguquguquka ngokweqile. Ngenxa yayo, unganweba indawo yakho yokugcina izinto ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso efana ne- Amahembe kuwo wonke umuntu onegama lakhe, isihloko somsebenzi, izikhwama zokukhangisangisho nezicathulo ngomsebenzi wakho wobuciko isikali esikhulu kanye uchungechunge olunqunyelwe.
Sivame ukuzibuza ukuthi isipho esiyingqayizivele kwabathandekayo ngesikhathi sikaKhisimusi, iPhasika, uSuku Lomama noma usuku lokuzalwa. Sifuna isipho sethu sigqame futhi sihlale isikhathi eside
ukuze kwenzeke, kufanele ucabange ngesipho esenziwe ngezifiso, imvamisa lezo ezisebenzayo azivezi izinkumbulo ezimnandi kuphela, kepha futhi zisebenza isikhathi eside.
Ukuphrinta kwe-DTG Akudingi ukulungiswa kwephrojekthi okungenye yezinzuzo zayo eziyinhloko (njengoba kunjalo nokuphrinta kwesikrini noma ukufekethiswa kwekhompyutha). Kungenzeka ukuthi uprinte imidwebo noma imibhalo evela esiqeshini esisodwa nje, futhi ukuphrinta isithombe kungokoqobo futhi kudume kakhulu ezimweni zezipho, kepha kubalulekile ukuthi isithombe sisesinqumweni esiphakeme kakhulu. Ukuphrinta kwe-DTG kukhethwa ngokulangazela yizikhungo zokukhangisa ngoba kubhekwa izindleko eziphansi nokuqina, okubaluleke kakhulu lapho kuhlelwa izingubo noma izindwangu emicimbini eyahlukahlukene noma njengemiklomelo yemincintiswano.
sikumema ukuba earlisenzo ngenkonzo yethu isitolongubani oyojabula ukuphendula imibuzo yakho futhi enze isilinganiso samahhala sokumaka.
ama-sweatshirts anelogo ye-Allegroama-sweatshirts anegamaukugqokwa kwamakhompyuthaIlogo Izikibhaamahembe amakiweizingubo ezinelogoizingubo ezinokuphrintauboya obunelogoukuphrinta isikriniukuhlobisa izinguboukuhlobisa izingubo ze-allegroukumakwa kwezinguboukumaka izingubo